Aqoonyahan Da’Yar Oo Dugsiyadda Hargeysa Ka Bilaabay Wacyi Gelin Ku Saabsan Wadaniyadda + Sawiro | Saxil News Network
Aqoonyahan Da’Yar Oo Dugsiyadda Hargeysa Ka Bilaabay Wacyi Gelin Ku Saabsan Wadaniyadda + Sawiro
Siyaasi Ismail Yusuf Adam ‘’’ Ismail Yare’’’ oo wacyi gelin ku saabsan Wadaniyada maalmihi ugu dambaysay ka hirgelinaayay dugsiyada sare ee magaalada Hargeisa , ayaa saaka waxa uu ka fuliyay dugsiga sare ee Macaarif.
Ismail yare , waxa uu ardayda uga shekeeyay qiimaha wadaniyada , iyo dariiqii dheeraa misna dhibaatada badnaa ee loo maray dalkan jamhuuriyada Somaliland, waxaanu ardayda uga war bixiyay waxqabadyadi shacbigu qabsadeed mudadii ka dambaysay Halganka iyo sida caalamku iskaga indho tiray guulaha qarankan.
Hadalada Aqoonyahankan da’da yar , oo aad moodaysay inay ruxayeen ama gilgilayeen quluubtii ardayda , ayaa ardayda uga shekeeyey dhacdooyin xanuun badnaa , oo ka warramayay wixii dalkan loo soom arayay , isla markaana waxaad arkaysay ardayda oo xiisad iyo xamaasad wadaniyadeed la ilmaynaayay.
Ismail ayaa ardayda u sheegay , xuquuqda muqaadiniinta ee dastuuriga iyo waajibaadka barbar socda , waxaanu ku dhiiri geliyay inay gutaan wajibaadkaasi qaran , jeclaadaaan ciidooda iyo calakooda , isla markaana uga hagar baxaan waddankooda.
Ugu dambayntii Ismail Yare , iyo ardaydii dugsiga Macaarif ayaa si daren iyo qiiro wadaniyadeed ku dheehantahay wada jir ugu qaaday heesta calanka jamhuuriyada Somaliland , taasi oo aad moodaysay inay dhamaan goob joogayaashi dhadhan iyo macno aad u balaadhan u samaynaysay.
Maaha marki ugu horraysay ee Aqoonyahan Ismail Yare ka fuliyo wacyi gelin noocan oo kale ah , balse bishi November sannadki la soo dhaafay ayuu sidanoo ardayda dugsiyada la wadaagay xogo muhiim ah oo ku saabsanaa cudurkii EBOLA oo markaasi fara baas ku hayay wadamada galbeedka Africa isla markaana cabsi gelinayay guud ahaan wadamada dunida , gaar ahaan wadamada qaaradan madaw.
Ismail Yare ayaa noqday xidig , si weyn uga soo dhex baxay dhalinyarada Somaliland , waxaanu muujiyay sanadihii u dambeeyey firfircooni ay weheliso lexe jeclo wadaniyadeed